Kulesi ukubuyekeza, sizoxoxa "Sterling Pub" yokudlela-bar (Togliatti). Ake sixoxe imenyu, design elingaphakathi, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, kanye ukuthi abantu bathini mayelana nempahla.
Lesi sikhungo isendaweni esitezi sokuqala isakhiwo 14-storey. "Pub Sterling" (Togliatti) ivule hhayi kudala, kodwa kakade wakwazi libeke ngokwaso njengoba indawo lapho ungakwazi nje jabula ukunambitha izitsha okumnandi, kodwa futhi isikhathi esikhulu nabangani.
Interior umelwe ngokunyenyeza obomvu, okuletha izivakashi okuvelayo ongenakulibaleka. Omunye izinkomba esibonisa enkantini njengoba isikhungo ephezulu ezingeni, kuyinto imenyu ezihlukahlukene. Kulula ngokwanele ukuthola isidlo ngendlela ethandwa nguye. Ukusungulwa isebenzisa zemvelo kuphela ukulungiswa kokudla kanye izinga imikhiqizo ukuthi isivakashi uzokwazi ukuba siqonde.
Indawo yokudlela-bar "Sterling Pub" (Togliatti, 40 Iminyaka Engu-Victory) - indawo eyingqayizivele lapho bangahlala inkampani ethokoza abangane, udle, futhi zizihlanganise nabantu ne bartenders. Kukhona ngezinye izikhathi ezihlukahlukene izenzakalo uyokwenza busuku engingasoze ongenakulibaleka.
Wena qiniseka ukujabulisa inkonzo kule ndawo enhle. abasebenzi friendly uzoqiniseka ukukusiza ukukhethwa izitsha kanye iziphuzo kanye bakutshele ukuthi kubalulekile ukuba alole focus.
Isici esiphawulekayo pub - kungcono design esiyingqayizivele. Abanikazi izikhungo babenza konke okusemandleni ukuze wenze izivakashi bazizwa okuhle. The elingaphakathi kuyinto yokudlela chip. Izivakashi isikhungo ngeke nje ukhululekile, kodwa futhi ukhululekile kakhulu.
I yavula ikamelo layo elikhulu, ne dark ukhuni amatafula, soft lesikhumba SOFAS ukwenza injabulo nentokomalo nokuvakasha emnandi. Lesakhiwo amafasitela omkhulu lapho ungakwazi ukujabulela imibono komuzi.
Counter ibha umelwe isiko engcono, etholakala eduze umklami wakhe izihlalo. Ehlobo, izivakashi kungaba ukuchitha isikhathi, hhayi nje kuphela lokhu kuvakashelwa, kodwa futhi emgwaqeni - amatafula ezengeziwe uzobe elise okuhlaba emthunzini encane.
Isikhombi Igumbi nomklamo siqukethe imibala ebomvu kanye amathoni amnyama, imininingwane emihle, kanye izinto ezibizayo.
Esikhathini cafe "Pub Sterling" (Tolyatti), isithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko kungaba simnandi kakhulu futhi ukugcwalisa ukudla. Imenyu izici izitsha ezifana salads, amasobho, inkambo main, side izitsha.
Lovers Sweet ngempela ukwazi ukuzikhethela dessert yonke ukunambitheka. Ngeke ngikushiye ngabandayo elicwengiweyo ibhizinisi kwasemini, lapho ungakwazi nambitha nsuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya pyatnitsu.On bethula Ungadla ehlukahlukene (sandwich, ubhontshisi), amaqanda, i-pasta, a Ukukhetha enkulu pancake.
Futhi uzinake Kuyaphawuleka ukuthi pub has a imenyu Japanese. Noma kunjalo, ngeke ujabulele izaphulelo. Kufika lesine ntambama ungakwazi ukujabulela cuisine Japanese nge 40% isaphulelo, futhi kwimenyu enkulu - 30%.
Ngaphezu ukudla okumnandi futhi zihlukahlukene, ezihlukahlukene iziphuzo Ngaphambi Kokuphrinta kwimenyu wonke umuntu. Ngosuku umkhuhlane ebusika ungakwazi uphuze inkomishi yekhofi. Le ndawo yokudlela-bar kukhethwa emelelwa ezixube imikhiqizo. Kulula ngokwanele ukuba ngikhethe uhlobo lomsebenzi ngendlela ethandwa nguye. Futhi kufanele kuphawulwe ngokuchichima itiye ku imenyu: berry, ginger, uvithamini, apula, rosehip.
Ehlobo ilanga lishisa ungakwazi uphuze umpe. Enye imenyu sici - kungcono ayo fresh, okuyinto ungakwazi lizwakale futhi sazise.
Indawo yokudlela-bar "Sterling Pub" (Tolyatti), ukubuyekezwa zazo sizoxoxa ngezindlela mncinyane, iyindawo lapho kukhona nomkhathi wawo ethokomele phakathi nezinsuku kanye fun - ngezimpelasonto.
Ikakhulukazi abanikazi imoto emhlabeni pub kukhona yokupaka elincane lapho ungakwazi ukupaka imoto yakho. Akekho yakhohlwa Abahamba eduze isakhiwo Ibhayisikili yokupaka lapho.
Kubha kukhona kungenzeka ukukhokha nge-credit card. Le ndawo ethokomele njalo ukudlala umculo ezingakwenza uphuphume upende ubusuku obuhle ngokungavamile. Enkantini kungavela hhayi kuphela inkampani, kodwa munye, zishise for inkomishi elimnandi yekhofi, ukunambitha okumnandi. Futhi ahlale kwi-inthanethi usebenzisa i-Wi-Fi yamahhala.
Ngaphezu kwalokho, ngeke uwushiye amanani ngabandayo. Enkantini kuyinto amanani neze kulokho iziphuzo kanye nokudla. Ungagcina kahle noma ukuthenga more. ngezikhathi ezithile yezefundo uqhuba amaqembu ahlukahlukene, uhlelo okuhlanganisa umdanso imibukiso ehlukahlukene, ukusebenza abaculi, kanye disco. Ngokuvamile izenzakalo ezihlukahlukene ihlelwe yi- "Pub Sterling", photographer likhona.
amadoda yibona phakathi izivakashi. Phela, sekuyisikhathi eside kubhekwa pub "owesilisa 'indawo lapho ungakwazi uphuze ubhiya nabangani, ukubukela ibhola futhi ube nesikhathi esihle. Kodwa manje izikhathi sezishintshile kakhulu.
Lesakhiwo uye amantombazane kulesi ukusungulwa ethokomele ukukhuluma ngezenzakalo oluzayo, xoxa izindaba zakamuva, adle futhi abe isiphuzo itiye uxoxe bartenders.
Labo abafuna uphumule futhi bachithe isikhathi endaweni enhle, kungcono eze lapha phakathi nesonto. Futhi labo zilungele "rip" ukuzijabulisa, kungcono ukuvakashela kule ndawo ngempelasonto. Izithombe izivakashi Pub nje egcwele injabulo.
Inhlanganisela design yokudala, cuisine ezihlukahlukene, amanani ezifanele kanye nesimo esihle ngeke ngikushiye ongenandaba esiyokhunjulwa isikhathi eside.
Le restaurant-bar has a Izibuyekezo ikakhulukazi omuhle. Izivakashi eziningi uqaphele ukuthi yokudlela is banzi kakhulu, amatafula zitholakala ngandawonye, okuyinto eyenza ukuthi kujabulisa ukuba ahlale nabangane.
Ngaphezu kwalokho, izivakashi izindawo uyajabula anhlobonhlobo izitsha kanye nekhwalithi ukudla. Umuntu angeke alithole indiva iqiniso lokuthi izivakashi walithanda intengo nje. Ziyakwazi yeningi ukuze isikhungo ungakhululeka kokubili abafundi kanye nabantu abadala.
Kulaba minuses kungenziwa waphawula ukuthi abanye izivakashi baye baphawula ukuthi inkonzo izikweletu. Kodwa kunalokho, incike kumuntu, indlela eyayivame ngayo njalo ukuthi ulinde. Kanti futhi, abantu abaningi bathanda izinto ezingafani kakhulu ukudla. Indawo yokudlela amakhasimende imibono ehlukene imenyu. Othile bathandile ukudla Japanese ngaphezulu, umuntu - IsiZulu. Kodwa-ke kumelwe kuqashelwe ukuthi izivakashi baziswa cuisine European ngalesi ukusungulwa.
Ngokuvamile, iningi izivakashi basutha ngemva kokuhambela kokuqala, "Sterling Pub" yokudlela-bar (Tolyatti), ogama ikheli ungathola kwesikhashana kulesi sihloko. Abaningi bathi ngokuqinisekile ayobuyela kule ndawo enhle.
Emgwaqweni iminyaka engu-40 Ukunqoba, 40 "Sterling Pub" (Togliatti). Ucingo: +7 848 222-40-40.
Amahora: ngoMsombuluko kuya ngoLwesine nangeSonto - kusuka 11:00 kuya 03:00, ngoLwesihlanu-ngoMgqibelo - ubusuku nemini.
Ngabe uhlala emzini Togliatti? Ingabe ufuna ukuzama izitsha okumnandi ukuthi uzohlala phakade inkumbulo yakho? Sincoma ukuvakashela yokudlela "Pub Sterling" - yindawo lapho uyohlale wamukelekile!
Ukusetshenziswa notamatisi. Yini esiyaziyo ngala madoda?
I Arab-Israeli ukungqubuzana